Iindaba Ezivela Kwi-Hollywood "Ezikhulu Zithandathu"
Bonke abahamba ngee-movie bajwayelene namagama ama-studios amakhulu ase-Hollywood akhulula abantu abakhulu, kodwa bambalwa baqonda ukuba ngamnye unomlando omdala kwizorhwebo. Enyanisweni, abanye baneminyaka engaphezu kwekhulu-kwaye abanye bafikelela ngokukhawuleza kumanqaku enkulungwane. I-studio nganye enkulu inembali ebalulekileyo ekuzonwabisa, ukuphuhlisa ezinye iifilimu ezithandwa kakhulu kunye ne-movie franchises kule minyaka edluleyo.
Nangona ezinye ii-studios ezinkulu ziye zaphela (ezifana ne-RKO) kunye nezinye aziyizona zendawo zokuhlala ezazisakuba zikhona (njenge-MGM), zihlala zii-studios ezinkulu zase-Hollywood eziqhubekayo ukukhulula ubuninzi bee-movie kwi-multiplex yakho yangingqi.
Nantsi i-primer eyisiseko kwii-studios ezithandathu apho iifilimu ziqhubeka nokupakisha abaphulaphuli kwiimidlalo.
Ifilimu ephezulu kakhulu: IJurassic World (2015)
I-Universal iyona studio endala yaseMelika. Enyanisweni, umongameli wokuqala we-Universal, uCarl Laemmle, wayengumlawuli wokuqala we-movie ukunika abadlali abakwikhredithi-kwesikrini, ekugqibeleni kwaholela kubadlali abadumile bebhokisi yebhokisi.
Ukususela kuma-1920 kunye nokuqhubela phambili kuma-1930 nakwiminyaka yokuqala ye-1940, i-Universe yaba nempumelelo enkulu kunye namafilimu e-monster ngeefilimu ezinjengeDracula (1931), u- Frankenstein (1931), uMmymy (1932), kunye no -Wolf Man (1941). I-studio's fortunes yatyhila kwiminyaka emashumi alandelayo, nangona yayineenkwenkwezi ezinjengeenkwenkwezi ezifana no-Abbott no-Costello, uJames Stewart noLana Turner. U-Alfred Hitchcock naye wachitha iminyaka elishumi elingaphumi kunye nesiqingatha somsebenzi wakhe wokwenza iifilimu zendalo yonke.
Kamva, le studio yaba nempumelelo enkulu kunye namafilimu amathathu kaSteven Spielberg, iiJaws zika-1975, ngo-1982 kunye ne-Jusssic Park ka-1993. Namhlanje, i-Universal Studios iyaziwa ngokubanzi ngamapaki ayo kumxholo njengamafilimu.
I-franchise engundoqo iquka i-Universal Monsters, i- Jurassic Park , iChapheka , i- Fast and the Furious , ibuyela kwixesha elizayo , kunye noJason Bourne .
Ifilimu ephezulu kakhulu: i- Titanic (ngo-1997) (umgaqo-mveliso kunye ne-20 Cent Century Fox)
I-Paramount yasungulwa njenge-Famous Players Film Company ngo-1912. Iifilimu zangaphambili zeParamount zibonisa ezinye zeenkwenkwezi zokuqala zoshishino, kuquka noMary Pickford, uRudolph Valentino, uDouglas Fairbanks kunye noGloria Swanson. Kwakhona i studio ekhuphe umqhubi wokuqala we- Academy Award ye-Best Picture , Amaphiko .
I-Paramount igcinwe igama layo njenge "studio studio" kuwo onke ama-1930, 1940, nangama-1950, eneembali ezifana noMarx Brothers, uBob Hope, uBing Crosby kunye noMarlene Dietrich kwiifilimu zayo. Nangona kunjalo, isigqibo seNkundla esiphezulu se-1948 esenza ukuba i-studios iphoqe i-studios ukuze ithengise iminyango yabo ephumelele kakhulu yecandelo leenkundla ezibuhlungu kakhulu, kwaye i-studio's fortunes ibhekene nokuhla kwehla.
Ekugqibeleni ekugqibeleni kuhlaselwa ngamandla amaninzi kunye neentengiso ezinjenge -Godfather (1972), uMgqibelo woMgqibelo ebusuku (1977), iGrase (1978), i- Top Gun (1986), iGhost (1990) kunye ne- Indiana Jones kunye ne- Star Trek .
Ezinye ii-franchises eziphambili ziquka abaguquleli , i- Iron Man (iifilimu zokuqala ezimbini), uMsebenzi: Akunakwenzeka , uLwesihlanu umhla we-13 (iifilimu zokuqala zefilimu), kunye neBeverly Hills Cop .
Izithombe zeWalt Disney (1923)
Izithombe zeWalt Disney
Ifilimu ephezulu kakhulu: Iimfazwe zenkwenkwezi: I-Force Awakens (2015)
I-Walt Disney Imifanekiso yaqala ubomi bayo njenge-Disney Brothers Cartoon Studio, kwaye yabizwa kwakhona emva kokuba impumelelo enkulu ye-Walt Disney kaMickey Mouse imifanekiso yekhathuni ivumelekile ukuba inkampani ikhulise ngaphaya kweemifanekiso ezifutshane zemifanekiso. I-studio yaqala ukukhulula iifilimu ngokulandelelana kwimihla ngemihla kuma-1940, kunye ne-Disney yokuqala yokuqala yefilimu yokuphila-yintsimi ye- Honduras Island . Kakade, i-Disney ye-media empire iye yanda ukuba iquke iipaki zayo ezidumileyo kunye nezokhenketho ezisusela kwi-studio ye-movie.
Nangona eyaziwa kakhulu kwiifilimi zeentsapho, kuma-1980s no-1990s i-Disney ikhuphe iifilimu ezivuthiweyo ngaphantsi kwee-Touchstone zeMifanekiso kunye ne-Miramax ibhanki.
Kwiminyaka yakutshanje, u-Disney uzuze uPixar (ngo-2006), iMarvel Studios (2009) kunye noLucasfilm (ngo-2012), owenzela i-franchise ephumelele kakhulu phantsi kwe-ambulula yayo.
Ukongeza kwii-classics ezithandwa ngokubanzi kunye nezenzo zokuphila ezikhutshwayo kwezo i-movie, ii-Disch key franchises ziquka i- Star Wars (ukususela ngo-2015), iMveli yeCinematic Universe (ukususela ngo-2012), kunye namaPirates of the Caribbean .
IWarner Bros Umfanekiso (1923)
IWarner Bros Imifanekiso
Ifilimu ephezulu kakhulu: I- Harry Potter kunye ne-Deathly Hallows Ingxenye 2 (2011)
I-Warner Bros yasungulwa ngabazalwana abane-uHarry, uAlbert, uSam noJack Warner. I-studio yokuqala yeyona nkwenkwezi enkulu yayingu-Rin Tin Tin, ongumalusi waseJamani obenenkwenkwezi yeefilimu ze-adventure. Kungekudala emva koko, iWarner yaba yi-studio yokuqala yokufumana iifilimu ezivakalayo eziqala ngefilimu ezifana noDon Juan (1926), i -Jazz Singer (1927), kunye neNdlela yaseNew York (1928). Ngee-1930, iWarner Bros yaba nempumelelo enkulu ngefilimu ze-gangster, ezifana ne- Little Caesar (1931) kunye ne -Public Enemy (1931). I-studio yakhulula enye yefilimu eyayithandwa kakhulu, eCasablanca , ngo-1942.
UWarner Bros wasebenza ngamagama amaninzi e-1940 nakwa-1950, kuquka uAlfred Hitchcock, uHumphrey Bogart, uLauren Bacall, uJames Dean noJohn Wayne. Ngama-1970 kunye nee-1980, abenzi befilimu abanjengoClint Eastwood kunye noStanley Kubrick babesebenza nge-studio.
I studio yaziwa ngokuba yintsika yabalinganiswa be-animated, kubandakanya i-Bugs Bunny, iDaffy Duck, ne-Porky Pig, kunye nobunini bayo be-DC Comics kunye nekhathalogu yayo enkulu yabalinganiswa be-superhero.
I-franchise engundoqo ibandakanya iBatman , Superman , i-DC Universe, uHarter Potter , i -Hobbit , i -Matrix , i- Dirty Harry kunye ne- Lethal Weapon.
Ifilimu ephezulu kakhulu: i- Skyfall (2012)
I-Columbia Pictures yazalwa kwi-studio encinane ebizwa ngokuba nguCohn-Brandt-Cohn owaziwayo ngokuvelisa amafutshane amancinci. I-Columbia Columbia esanda kutsho ikhulisa inzuzo yayo xa uFrank Capra eyalathisa uchungechunge lweentsimbi ze-studio, kubandakanyekile Kwakuye Kwabakho Ubunye Ubusuku (1934), Awukwazi Ukuthatha Nakho (1938), kunye noMnu. Smith Uya eWashington (1939). ). I-Columbia nayo yaphumelela ngamfutshane ama-comedy, ekhulula iifilimu eziqulathe i-Three Stooges ne-Buster Keaton.
Le mpukelo yaholela ekugqibeleni amafilimu kwiminyaka emashumi emva kamva, njenge- From Here to Eternity (1953), iBridge eBrithani Kwai (1957), kunye noMntu Wezo Zonke Ixesha (1966). Nangona kunjalo, i-studio yaphantse yachithwa ngo-1970.
I-Columbia yabona impumelelo kwiminyaka yama-1980 kunye nefilimu ezinjengeGandhi (1982), Tootsie (1982), i -Big Chill (1983) kunye ne- Ghostbusters (ngo-1984). Emva kokuba neenkampani ezininzi (kubandakanywa neCoca-Cola), i-Columbia inikwe ngu-Sony ukususela ngo-1989.
I-franchise engundoqo iquka uSspider-Man , Amadoda aseMnyama , i -Karate Kid , kunye ne- Ghostbusters .
I-20 yeXesha leNkulungwane (1935)
Ifilimu ephezulu kakhulu: I- Avatar (2009)
I-20 ye-Century Fox yadalwa ngo-1935 xa i-Fox Film Corporation (eyisekwe ngo-1915) idibene ne-Twenty-Century Pictures (eyisekwe ngo-1933). Iinkwenkwezi zokuqala ze-studio ezidibeneyo zaziquka uBetty Grable, uHenry Fonda, iTyrone Power kunye neShirley Temple. Impumelelo ye-studio yaqhubeka kwiminyaka ye-1950 kunye neengqungquthela zemimculo emihle kakhulu , kuquka iKarousel (1956), U-King kunye nam (1956), eMzantsi Pacific (1958), kunye ne -Sound of Music (1965). UFox naye wenguvulindlela "widescreen" cinema ngokuphuhlisa inkqubo yeCinemaScope ebonwe ngowe-1953.
Nangona impumelelo yeCinemaScope kunye neenkwenkwezi ezintsha ezinjengeMarilyn Monroe, iCopopra (i-1963) ye- epicrafa eyayixabisa kakhulu, ehamba no-Elizabeth Taylor noRichard Burton, iphantse ifake i studio. Emva kwempumelelo yeSandi seMculo , iifilimu ze-sci-fi ezinjenge- Fantastic Voyage (1966) kunye nePlanet ye-Apes (1968) yahlaselwa yeso studio, kodwa yagqitywa ngokumalinganisa nempumelelo enkulu ye- Star Wars (1977).
I-franchises ebalulekileyo kwimbali ye-20 ye-Century Fox ibandakanya i- Star Wars ye-Star Wars, ii- movie ze- X-Men , ikhaya elilodwa , i- Hard Hard , kunye nePlanet ye-Apes .
Ngubani ohlabelelayo kwii-Dreamgirls ze-Movie Soundtrack?
Ngaba i-Movie 'ayinakunqandwa' ngokusekelwe kwiNdaba yeNyaniso?
Iimpepha ezininzi eziphumeleleyo ezilawulwa ngabaFowuni beComputer
Kutheni iLwesihlanu iCandelo le-13 libhekwa lingenangqiqo?
"Mi Chiamano Mimi" Iingoma kunye neNguqulelo Yombhalo
Iimifanekiso ezi-10 ze-Anti-War Movies zexesha lonke